Ndakasvirwa naGarden Boy aive neZIMBORO! – Makuhwa.co.zw
Ndakasvirwa naGarden Boy aive neZIMBORO!
Ndainge ndakarasikirwa, rega vakuru vati usaera nyoka negavi, ndini uyo nezuro ndabva zvangu kubasa. Ndakanga ndine zemo rinotyisa, ndakapinda mutub ndokuedza kuchaya bonyora ndichitambisa kabhinz kangu kana kumbotunda ndikati plan ndeipi. Ndafonera boyfriend ikati iri bizy plus mukadzi wake akadzoka, ndokubva ndadongorera nepahwindo remutoilet ndiye dhumadhuma nagarden boy ari bzy kundidongorera, ndakabva ndamudaidza mubathroom akada kumboramba ndokubva ndamuti basa rapera.
Ndakabva ndapukuta mboro yake nekatowel ndokuiti chwi mukanwa ndikanzwa chikomana choshita kunge nyoka, ndakaichukucha mboro iyi wanike zvino rava danda. ichidonherera tumvura idzo tsinga zvino dzati tara tara. mukomana akanga asati ambodyiwa mboro for shuwa, ndakabuda mutub ndokumuti agare pachemba ndakamugarira mboro ichipainda mubeche rangu zvinyoronyoro ndakatanga kusumukira ndichigarira ndichiwedzera speed ndikanzwa oda kutunda ndokubva ndamupa ndakakotama ndakanyatsonzwa kuti zhii pamuromo wechibereko, mwana anokovira iyeye.
Akandisvira ndakadaro ndichingonakirwa chete ndakanzwa oda kutunda ndokuchinja ouya pamusoro pangu ndakamupa chikapa apa ndakasimukira pamusana aiti akati kovikovi omira ndaibva ndanzwa kuda aiti akamboiburitsa so oguma kabhinz kangu, ahhhh ndotunda kuverenga kuti ndakatunda kangani mayb kanopfuura ka20 akazoti avakuda kupedza akawomba seshumba ndichibva ndamuti usaitire mukati bt it was too late, mukomana ane masperms zvake iyeye, ndakanzwa kuti zhii kekutanga kechi2, 3, 4, 5 paaitunda muviri wangu waidairira, Ndaisaziva kuti basa remunhu harina basa mboro iyo MBORO IYI HANDIMBOIREGA THANKS, Jemu unonaka nhasi ndokuinga kucottage ikoko
Related Topics:Ndakasvirwa naGarden Boy aive neZIMBORO!
Mukadzi waLandlord Anebeche Rinonaka Vakomana!
Masvirirwo Andakaitwa neSingle Mother Yairoja Pamba Pedu